Goorma ayuu SEO mudan yahay $ 100 Million? | Martech Zone
Talaado, July 20, 2010 Axad, Oktoobar 30, 2011 Douglas Karr
Ilaa maanta, ma hubo inaan helay warqad cad oo faahfaahsan oo ku saabsan cabbiraadda qiimaha hagaajinta mashiinka raadinta illaa inta laga akhrinayo Warqaddan Cad, Sida Loo Qiimeeyo SEO. Waxaa jira boggag kale oo soo saaray joornaal la mid ah, laakiin tani waa markii ugu horreysay ee aan arko iyadoo sharraxaysa qof leh MBA inuu si buuxda u fahmo.
Dukumiintiga wuxuu ku socdaa akhriste kasta, iyadoo la adeegsanayo xaashiyaha iyo qalab bilaash ah oo laga heli karo Google, si loo falanqeeyo loona xisaabiyo qiimaha darajaynta. Waxaa ku jira warqadda cad:
Qiimayn SEO oo ah Falanqaynta Comp
Annual Qiimaha Bogga Koowaad ee Google Ranking
Annual Qiimaha Darajo Bixinta Koowaad Dhamaan Makiinadaha Raadinta
Annual Qiimaha Dabada Dheer Qiimeynta Dheecaanka
Qiimayn Muddo Dheer Organic Qiimeynta
Xisaabinta Qiimaha Jira ee Qiimeynta Bogga Koowaad
Weligaa ma isweydiisay waxa qiimaha sanadlaha ah ee bogga Koowaad ee Google Ranking loogu talagalay erey aad u tartamaya sida Caymiska Caafimaadka? Sidee tahay $ 7,471,194 dhawaq? Taasi waa dhab ahaan waxa ku kici lahaa, in kastoo, in la dalbado oo lagu guuleysto xayeysiis ku filan si loo helo tiro la mid ah booqashooyinka sanadkiiba (840k oo ah $ 8.90 gujintooda). Ku Shan-Sano Net Qiimaha Joogtada ah u dhaqaajiyaa lambarkaas ku dhowaad $ 100,000,000. (Waa inaad aqriso warqadda cad si aad u fahanto sababta taasi u tahay qiimeyn sax ah).
SEO-gaaga ayaa laga yaabaa inuusan u qalmin wax intaa ka badan, laakiin waa waqtigii aad joojin lahayd inaad ka fikirto hagaajinta mashiinka raadinta sida kharash kale oo suuq geyn ah oo aad bilowdo inaad bilowdo inaad ku qiimeyso maalgashi shirkad kuu rogi kara - gaar ahaan dhaqaalahaan.
The maalgashi lagu qiyaasay shirkaddu inay ku kasbato bogga ugu horreeya ee loogu talagalay Caymiska Caafimaadka is $ 200,000 sanadka ugu horeeya iyo $ 50,000 sanadkii ka dib si loo ilaaliyo darajada. Taasi waa wax aad u fiican ku soo noqo maalgashiga iyo qayb yar oo ah kharashka waxa ay qaadaneyso si loo helo isla gaadiidkaas warbaahinta caadiga ah.
Soo dejiso Warqadda Cad laga bilaabo Slingshot SEO.
Dejinta dallacsiinta dabka leh WildFire
Jul 21, 2010 markay ahayd 9:57 AM
Waxa aan ugu jeclahay buuggan cad ee SEO ayaa ah in isbarbardhiga tooska ah loo isticmaalo bedelka ugu macquulsan - Adwords. Halka aad si dhab ah ugu hagaajin karto ololahaaga Adwords, taasi waa kharash socda. Warqadani waxay cadeyneysaa kuwa liqay, doollarka suuqgeynta hore iyo goorta bixinta la bixin doono.
Warqadani waxay kor u qaadeysaa qiimaha haraaga ah ee darajo sare oo dabiici ah, si kastaba ha noqotee ganacsigu wali waa inuu ka fikiraa dhowr qaybood oo hoos u dhigaya iyo sida ay u saameynayaan bixinta qulqulka lacagta;
% soogalootiga runti badala kadib gujintooda kadib
Qiimaha nolosha qofka macaamiisha ah
Shuruudaha kuxiran darajada # 1 waxay keeneysaa iib
Aynu dhahno waxaad leedahay bartilmaameed aad u bartilmaameedsan, soo-jeedin qiimo leh oo aad ku guuleysato heer aad u sarreeya oo ah 35% (u horseedaya iibinta) mar haddii isticmaaleyaashu ku dhacaan bogga soo degitaanka - Hadda oo ku dhowaad $ 7.5 milyan falanqaynta isugeyn waa $ 2.6 milyan halkii.
Waxa ugu weyn ee ku saabsan Slingshot SEO, iyo wax ku biirinta kobocooda baaxadda leh, ayaa ah inay iska celin doonaan macaamiisha marka qiimeynta liistada dabiiciga ah iyo bixinta ka dhalata micno samaynayso.